Before တစုံတရာမပြုခင် – Naung Taung Add-ons
by Ernest Hemingwy ( 1899-1961)
Before you act, Listen. သင်တခုခု မလုပ်ခင် အရင် နားထောင်နားစွင့်ကြည့်။
Before you react, think. သင်တခုခု မတုန့်ပြန်ခင် အရင် စဉ်စား။
Before you spend, earn. သင်တခုခု ငွေမသုံးခင် အရင် ရှာ။
Before you criticize, wait. သင်တခုခု မဝေဖန်ခင် အရင် ခဏစောင့်ကြည့်။
Before you pray, forgive. သင်တခုခုအတွက် ဆုမတောင်းခင် အရင် ခွင့်လွတ်။
Before you quit, try. သင်သည် အလုပ်တခုခုက မထွက်ခင် အရင် ကြိုးစားကြည့်။
Ernest Hemingwy ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ၀တ္တုတိုစာရေးဆရာပါ။ 1954 ခုနှစ်ရဲ့ စာပေဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိူဘယ်ဆုရခဲ့သူလည်း ဟုတ်တယ်။ စာပေနဲ့ နိုဘယ်ဆုရတဲ့သူဆိုတော့ သိပ်ထူးဆန်းပြီး စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ၀တ္ထု (၇) ပုဒ်နဲ့ အခြား ၀တ္ထုတိုအမြောက်အများရေးသားခဲ့တယ်တဲ့။ ၂၀ ရာစု အမေရိကန်စာပေလောကကို လွမ်းမိုးနိူင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
Ernest Hemingwy ရဲ့ စကားလေးဟာ ကိုယ့်ရင်ထဲထိ ပွန်းရှပြီး ခံစားရတဲ့ စကားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ တို့တွေ အားလုံးဟာ သူပြောသလို သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာဘဲလို့ ထင်မိတယ်။
တို့တွေဟာ မစဉ်းစားဘဲ လုပ်တတ်တယ်။ လုပ်ရပ်တခုရဲ့ သက်ရောက်မှုကို မစဉ်စားဘဲ ချက်ခြင်းလက်တုန့်ပြန်တတ်လို့ တက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကလည်း မနည်းတော့ဘူး။ မဆင်မခြင်သုံးတဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ရှိရှိ မလောက်ခဲ့ဘူး။ သူများကိုဝေဖန်ရင်လည်း ခဏလေးတောင်မစောင့်ဘဲနဲ့ ဝေဖန်လိုက်တာဘဲ။ ဆုတွေလည်းအကြိမ်ကြိမ်တောင်းကြတယ် ဒါပေမယ့် သူတပါးကို ခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုရင် တော်တော်ဝန်းလေးနေတတ်တဲ့အရာဖြစ်နေသေးတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် Ernest Hemingwy ရဲ့စကားလေးကတော့ တို့တွေအတွက် ရေရှည်ရွေ့နိူင်ဖို့ အသိတရားတွေဖြည့်စွက်ပေးနေသလိုဘဲ။ သူအကြောင်းကို ဆက်ရေးရရင် အားတက်စရာတွေနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းစရာတွေလည်း ပါနေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောခဲ့တဲ့ ဒီစကားလေးကို ဘဲ လက်တွေ့သတိထားဖို့ဘဲ ကောင်းတယ်။
၁၄ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၈။
Resilient Community and Farm Initiatives, Pyin Oo Lwin
ဆရာပီတာ၏ facebook မှ ကူးယူသည် (ntaddons)